Isuduwidda Suuqgeynta Caalamiga ah ee Hal Sumcad oo ka jirta 23 Dal | Martech Zone
Isniin, Janaayo 9, 2017 Nate Holmes
Sida summad caalami ah, midna ma lihid caalamka dhagaystayaasha. Dhageystayaashaadu waxay ka kooban yihiin dhagaystayaal badan oo heer gobol iyo heer degmo ah. Iyo mid kasta oo ka mid ah dhagaystayaashaas waxaa ku jira sheekooyin gaar ah oo lagu soo qabto oo loo sheego. Sheekooyinkaasi ma ahan kuwo sixirrool ahaan u muuqda. Waa inay jirtaa hindise lagu raadinayo, lagu qabanayo, ka dibna lala wadaagayo. Waxay u baahan tahay isgaarsiin iyo iskaashi. Markay dhacdo, waa qalab awood leh oo ku xiraya astaantaada dhagaystayaashaada gaarka ah. Marka sidee ula kaashan kartaa kooxaha ku kala baahsan 23 dal, shan luqadood oo muhiim ah, iyo 15 aag waqtiyeed?
Dhisida sumad caalami ah oo isku xiran: xaqiiqda oo leh dukumiinti tilmaamaha sumadda 50-bog ah
Tilmaamaha tilmaamaha ayaa muhiim u ah joogteynta sumad joogto ah. Waxay kooxahaaga siinayaan aragti ku saabsan cidda, maxay tahay, sababta, iyo sida sumaddu u tahay. Laakiin dukumiinti ka kooban 50 bog oo heerarka sumcadda kaligood ah ma kori doono sumcad caalami ah. Waa hal gabal oo kaliya oo u baahan in lagu daro sheekooyinka macmiilka iyo waxa ku jira si loola xiriiro.
Miyaad gelisay waqti aad u badan iyo lacag mashruuc caalami ah oo caalami ah oo kaliya si aad u hesho kooxahaaga adduunka oo dhan si aan looga jawaabin? Tilmaamaha calaamadaha waaweyn keli kuma koobmi doonaan kooxaha adduunka ka dib markay sii daayaan midkood. Xitaa haddii ay leedahay dhammaan sharciyada oo ay u muuqato mid fiican, wali nolol kuma soo noolaanayo. Xitaa iyada oo shaqada cajiibka ah ee socota, ma jirto dadaal dhab ah oo lagu wadaago waddamada oo dhan.
Summad caalami ah waa inay suuq u gashaa dhagaystayaasha maxalliga ah iyo kuwa gobollada oo ay aaminaan kooxaha suuqgeynta si ay u gaarsiiyaan ololeyaal suuqgeyn maxalli ah
Dhageystayaashaada bartilmaameedka ah qof walba maahan. Ma jiro hal dhagaystayaal "caalami ah" oo wadareed oo kooxdaadu ay diiradda saari karto. Dhageystayaashaadu waxay ka kooban yihiin dhagaystayaal badan oo maxalli ah. Markaad isku dayeyso inaad suuq u dhigto qof walba adoo adeegsanaya isla luuqad iyo sawirro isku mid ah, waxaad ku dhammaaneysaa sawir-gacmeedka kaydka ah ee aan cidina la xiriirin. U diyaar garowga awood u siinta koox kasta oo suuq-geyn ah oo ka kala socota 23-ka waddan si ay u qabtaan una wadaagaan sheekooyinkaas shaqsiyadeed, sheekooyinkaasi waxay markaa udub-dhexaad u noqon doonaan nooca cusub ee la hagaajiyay.
Sheekadaada adduunka waxay ka kooban tahay sheekooyin maxalli ah
Summad caalami ah ma noqon karto wado hal dhinac looga baxo xarunta. Hanuuninta iyo jiheynta ka timaada xarunta waa muhiim, laakiin istiraatiijiyaddaada caalamiga ah waa inaysan iska indhatirin qiimaha kuwa ugu dhow dhagaystayaasha sumadda ay la hadlayso. Waxaa loo baahan yahay in la is weydaarsado fikradaha iyo waxyaabaha u dhexeeya xarunta dhexe iyo kooxaha adduunka. Tani waxay fidineysaa gaarista astaantaada waxayna siineysaa kooxahaaga caalamiga ah lahaanshaha astaanta.
Falsafada noocan ah "u oggolaaneysa hal abuurka" ma aha oo kaliya inay awood siiso kooxaha maxalliga ah laakiin waxay siisaa sheekooyin tayo leh iyo nuxur kooxaha kale ee gobollada iyo sidoo kale xaruntooda dhexe. Iyada oo fikrado dheeri ah iyo wadaagis nuxur ah, isku xirnaanta iyo noolaanshaha sumaddu waxay noqoneysaa.
Isku xirka kooxaha suuq geynta guud ahaan 23 dal
Markaad ka shaqeyneyso 15 goobood oo kala duwan, kuma kalsoonaan kartid wicitaanada inay noqdaan waxa kaliya ee ay ku wada xiriiraan, gaar ahaan marka aad la macaamileyso kaabayaasha waddamada soo koraya oo u horseedi kara wicitaanno isdaba joog ah. Kordhinta qaab is-adeegsi waxay awood u siineysaa kooxaha inay helaan waxa ay u baahan yihiin, markay u baahdaan.
Kooxuhu waa inay dhisaan a maareynta hantida digital (DAM) nidaamka. Nidaamka 'DAM' waa goob dareen leh, oo la heli karo oo qof walba uu ka heli karo ama ku biirin karo waxyaabaha. Waxay fududeeysaa wadaagista sheekooyinka iyo waxyaabaha ku jira. Abuuritaanka qiime u leh suuqleydan dadaalka badan waxay gacan ka geysteen kobcinta nidaamka si dabiici ah, halkaas oo nooca docda ah ee doc uu ku dhacay.
Nidaamka 'DAM' wuxuu u shaqeeyaa sidii xarun udub dhexaad u ah dhammaan kooxaha. Waxay siinaysaa iyaga awood ay ku xirmaan oo ay ula socdaan waxa ku jira sheekooyinka ay helaan, waxayna si fudud u siinaysaa hufnaan waxa kooxaha kale abuurayaan. Adeegsiga nidaamka 'DAM' wuxuu awood siinayaa xarunta dhexe, kooxaha maxalliga ah, iyo kuwa kaleba inay iskaashi yeeshaan - shaqsi keli uma aha.
Sidee maaraynta hantida dijitaalka ahi isugu xirtaa 23 dal
Shaqaalaynta sawir qaade maxalli ah si uu u soo qabto sheekooyinka macmiilka, iyo u adeegsiga sawirrada ololayaasha suuqgeynta maxalliga ah. Laakiin intaas kuma joogsato. Sawirada waxaa lagu soo shubi karaa nidaamka DAM waxaana dib loogu eegi doonaa tayada iyo metadata loo qoondeeyay. Kadibna waa la heli karaa si loogu isticmaalo hoosaadyo kale, warqad toos ah oo dhinac saddexaad ah, iyo xarunta warbixinnada sanadlaha ah. U wareejinta diiradda xoojinta kooxahooda suuq-geynta maxalliga ah waxay gacan ka geysatay faafinta fikradaha, baahinta ololayaasha suuq-geynta, iyo wadaagista sheekooyinka guusha.
Tags: maaraynta hantidabrandingekspertenxidheenkamaaraynta hantida dijitaalka ahcaalamkasumadda adduunkafidin
Nate Holmes waa isku duwaha suuq geynta Shirkadaha Widen iyo iyada Sawir -gacmeed kordhin brand. Nate wuxuu leeyahay xiiso xoogan oo ku saabsan maareynta astaanta, suuqgeynta waxyaabaha ku jira iyo falanqaynta suuqgeynta. Nate wuxuu ku raaxeeyaa la shaqeynta dadka ka soo kala jeeda asalka kaladuwanaanta hayadaha kala duwan, laga bilaabo laga bilaabo kooxaha isgaarsiinta suuq geynta ee shirkadaha waaweyn ilaa maamulayaasha ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexe.